Kormeerka & Tijaabada - Pandawill Technology Co., Ltd.
Tayada heer sare ah, isku halaynta wax soo saarka iyo waxqabadka sheygaaga ayaa lagama maarmaan u ah in la kordhiyo qiimaha sumadaha iyo sidoo kale saamigaaga suuqa. Pandawill waxay si buuxda uga go'an tahay inay gaarsiiso heer farsamo heer sare ah iyo adeegga ugu sarreeya adeegga korantada. Ujeeddadeennu waa soo saarista iyo gaarsiinta alaabooyinka cillad la'aanta ah.
Nidaamkeena Maareynta tayada oo ay ku xigto nidaamyo taxane ah, geedi socod iyo qulqulka shaqada, waa mid isku dhafan oo si xoogan u xoojiyay qeyb ka mid ah howlahayaga, oo ay yaqaanaan dhamaan shaqaalaheena. At pandawill, waxaan muujineynaa muhiimadda qashin baabi'inta, iyo farsamooyinka wax soo saarka caatada ah, oo u oggolaanaya hufnaan, iyo tan ugu muhiimsan, geedi socod wax soo saar oo lagu kalsoonaan karo oo miyir leh.
Hirgelinta ISO9001: 2008 iyo ISO14001: shahaadooyinka 2004, waxaa naga go'an inaan ilaalino oo aan horumarino howlaheena iyadoo la raacayo hababka ugu wanaagsan ee warshadaha.
At pandawill, waxaan ku hirgelineynaa dhowr heerar oo kormeer ah badeecadeena baxa. Laga bilaabo qalabka aan soo-gaadhin oo ku dhammaanaya xirmooyinka alaabada ugu dambeysa. Waxaan ku haynaa booska daabacaadda daabacadda ee dhejiska, meelaynta boostada, Prereflow, Maqaalka Kowaad ee kormeerka iyo Kormeerka Aaladda Iswada. (AOI) Halkaas waxaa laga fiiriyaa mikroskoob kahor inta aysan u dhaqaaqin howsha xigta. ugu dambayntiina ku dhamaanaysa waaxdayada Xakamaynta Tayada halkaas oo aan ku leenahay sannado khibrad ah oo kaliya kuwa ugu aqoonta badan QC.
Kormeerka iyo Imtixaanka oo ay ka mid yihiin:
✓ Imtixaanka Tayada Aasaasiga ah: kormeerka muuqaalka ah.
✓ Baadhitaanka raajada: tijaabooyinka BGAs, QFN iyo PCB-yada qaawan.
✓ Hubinta AOI: tijaabooyinka koollada alxan, qaybaha 0201, qaybaha maqan iyo kala-goynta.
✓ In-Circuit Test: Imtixaan wax ku ool ah oo loogu talagalay noocyo badan oo isku dhafan iyo cilladaha qaybaha.
✓ Tijaabinta waxqabadka: sida ku cad habraaca baaritaanka macmiilka.